Vaovao - mpanokatra lavaka, fantatra ihany koa amin'ny tsofa loaka na tsofa lavaka, dia ilazana tsofa boribory manokana ho an'ny lavaka fametahana milina ao amin'ny indostria na injeniera maoderina.
Ny mpanokatra lavaka, fantatra ihany koa amin'ny tsofa lavaka na tsofa lavaka, dia ilazana tsofa boribory manokana ho an'ny lavaka fametahana milina ao amin'ny indostria na injeniera maoderina. Mora ny miasa, mety entina, azo antoka ary be mpampiasa. Mety ny manapaka lavaka boribory, lavaka toradroa, lavaka telozoro, tsipika mahitsy ary miolakolaka amin'ny tampon'ny varahina, vy, vy tsy misy fangarony, plexiglass ary takelaka hafa rehefa apetraka amin'ny drill elektrika mahazatra.
Araka ny haben'ny boribory samihafa, ny tappers dia manana vavahady sy famaritana samihafa. Mandritra izany fotoana izany, araka ny halalin'ny lavaka, dia mizara ho karazana mahazatra sy karazana entana mavesatra izy ireo. Izy ireo dia apetraka amin'ny fandavahana tanana elektrika, fandavahana fiatraikany, fandavahana rocker ary fitaovana elektrika hafa.
Misy karazany roa ny:savaivony raikitra sy savaivony miovaova (karazana fiaramanidina). Ny mpanokatra lavaka savaivony miovaova dia matetika ampiasaina amin'ny haingo anatiny sy ivelany.
Mpanokatra lavaka savaivony raikitra, misy karazana mahazatra, karazana fiatraikany, karazan-drivotra, izay karazana hatsiaka amin'ny rano no matetika ampiasaina amin'ny fanokafana rindrina, miaraka amin'ny fahombiazana avo sy fanokafana tsara tarehy.
Araka ny fanasokajiana ara-materialy:mpanokatra lavaka bi-metaly / tsofa loaka bi-metaly, tsofa lavaka karbida simenitra, tsofa lavaka diamondra. Fitaovana samihafa no ampiasaina hanapahana fitaovana samihafa. Ny tena fahita ampiasaina dia tsofa bimetallika. Ny karbida simenitra dia atolotra ho an'ny fitaovana vy mafy, ary ny diamondra dia atolotra ho an'ny vera, fibre karbaona, seramika ary fitaovana marefo hafa.
Ireo kojakojan'ilay mpanokatra lavaka dia misy:tohana fanohanana, lohataona, fandavahana, sns. Ny tsofa lavaka misy savaivony lavaka hafa dia misy famaritana roa amin'ny tahony fanohanana. Ny savaivon'ny lavaka eo anelanelan'ny 14 sy 32 mm dia famaritana iray ary ny savaivon'ny lavaka lehibe kokoa noho ny 32 mm dia famaritana iray ihany.
Ireo kojakojan'ilay fahitana loaka dia ahitana:tohana fanohanana, lohataona, fandavahana, sns. Ny mpanokatra ny lavaka misy savaivony lavaka samy hafa dia misy famaritana roa momba ny tohana fanohanana. Ny savaivon'ny lavaka eo anelanelan'ny 14 sy 32 mm dia famaritana iray ary ny savaivon'ny lavaka lehibe kokoa noho ny 32 mm dia famaritana iray ihany.
Ny vy haingam-pandeha dia karazana vy vita amin'ny vy miaraka amin'ny hamafin'ny hafanana, fanoherana avo lenta ary fanoherana hafanana avo. Ny vy haingam-pandeha dia ampiasaina indrindra amin'ny fanamboarana sisin-dàlana manify sy miantraika amin'ny fitaovana fanapahana vy, ary koa ny fiakaran'ny maripana avo sy ny fandroahana mangatsiaka noho ny fahombiazan'ny fizotrany ary ny fitambaran'ny tanjaka sy ny hamafiny.
Tapper vy haingam-pandeha dia karazana fitaovana fanokafana vita amin'ny vy haingam-pandeha, izay ampiasaina indrindra hanokafana lavaka amin'ny lovia vy na fantsona. Azo ampiasaina amin'ny lavaka fametrahana eo afovoany alohan'ny fisokafan'ny lavaka, ary avy eo miaraka amin'ny tsofa loaka bi-metaly hanokafana ny savaivon'ny lavaka takiana.
Misy karazany maro ny sokafana amin'ny lavaka firaka. Ankehitriny ny tsena dia mizara ho (mahazatra) ravina vy manify manokana, (karazana azo ampiharina) vy manify manify misokatra. (ambaratonga antonony) vy tsy misy fangarony manokana. (karazany avo lenta) vy tsy misy fangarony manokana (ny hatevin'ny takelaka vy dia mety hahatratra 2cm mahery).
Faharoa: ny mpanokatra ny lavaka bimetallika dia ampiasaina hanokafana takelaka vy, hazo ary lovia plastika.
Fahatelo, ny fampiasana ny mpanokatra lavaka paompy haingam-pandeha dia mitovy. Isa: mahazatra, salantsalany antonony, kilasy avo lenta, fikolokoloana feno, ambaratonga indostrialy.
Farany, ny tapper firaka dia mety amin'ny lovia vy ary ny milina fanoratana vy hafainganam-pandeha dia mety amin'ny fantsom-by.
6542 vy haingam-pandeha
Endri-javatra: atiny ambany vanadium (1%) ary atiny kobalta avo (8%). Ny Cobalt sy Du dia afaka manaparitaka ny gazy karbonika ao anaty matrix mandritra ny famonoana sy ny fanamainana, ary mampiasa ny hamafin'ny matotra ambony hanatsarana ny fanoherana ny fitafy.
Hamafisana: ity karazana vy haingam-pandeha ity dia misy hamafiny, hamafin'ny hafanana, fanoherana fanoherana ary fahaizanao mitoto. Ny hamafin'ny fitsaboana hafanana dia mety hahatratra 67-70hrc, saingy misy fomba fitsaboana hafanana manokana ampiasaina hampiasa ny hamafin'ny 67-68hrc, izay manatsara ny fahombiazan'ny fanapahana (indrindra ny fanapahana tsindraindray) ary manatsara ny hamafin'ny fiantraikany.
Fampiharana: ny vy haingam-pandeha haingam-pandeha dia azo atao isan-karazany amin'ny fitaovana fanapahana, izay azo ampiasaina hanapaka sarotra ny fitaovan'ny milina. Noho ny fahombiazany tsara fikosoham-bary, dia azo amboarina ho fitaovana fanapahana sarotra izy io, izay be mpampiasa eran'izao tontolo izao. Saingy, noho ny tsy fahampian'ny loharanom-pahalalana kobalt any Chine, dia avo dia avo ny vidin'ny vy kobalt, izay manodidina ny 5-8 heny noho ny an'ny vy haingam-pandeha tsotra.
Fiarovana ny tontolo iainana: fitaovana fiarovana ny tontolo iainana, tsy misy loto.